ဂိုနာ(ခ) အပြစ်သည် ရှောင်ကြဉ်ခြင်း သည် ခဝပ်ကိုးကွယ်မှု အစစ်အမှန် ဖြစ်ပါ၏။
ဇူလိုငျ ၂၁, ၂၀၂၁ - ၁၁:၂၆ ညနေ News Code : 1162103 Source : ABNA Link:
ဤရေဝါယသ် တော်အား အိုဒသွဒ်ဒအီကျမ်း မှ တင်ပြပါ မည်။
قالمعصومعصوم (علیه السّلام ):
اَصْلُ الدَیْن الْوَدَعُ کُنْ وَرِعاً تَکُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ کُنْ بِالعَمَل بِالْتَّقْویٰ اَشَدَّ اِهْتِمَاماً مِنْکَ بِالعَمَلِ بِغَیْرِهِ فَاِنَّهُ لاَ یَقِلُّ عَمَلٌ یَتَقَبَّلُ لِقَوْلهٍ تَعَالٰی "اِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِیْنِ . (عدة الداعی)
لَیَجِیْئَنَّ اَقْوَامٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ کَجبَالِ تَهَامَةَ فَیُوْمَرُ بِهِمْ اِلٰی النَّارِ، فَقِیْلَ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ مُّصَلُّوْنَ ؟ قَالَ (ص) کَانُوا مُصَلّوْنَ وَیَصُوْمُوْنَ وَیَاْخُذُوْنَ وَهْنًا مِّنَ اللَّیْلِ لٰکِنَّهُمْ کَانُوْا اِذَالاَحَ لَهُمْ شَی مِنْ الدُّنْیَا وَسَبُوْا اِلَیْهِ .
မအ်စူးမ် (အ.စ) မိန့်တော် မူ၏။
သာသနာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်သည် ဂိုနာ (ခ) အပြစ် များ မှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် အား လုံး ထက် ခဝပ်ကိုးကွယ်သူ မွတ်တက္ကီ (ခ)သီလ ၊သမာဓိ ရှိသူ ဖြစ်ရန် တွက် အပြစ်မှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ မိမိကိုယ်ကို မိမိ သက္က်ဝါး နှင့်တန်ဆာ ဆင်ရန် စီစဉ်ပါလေ။ သက္က်ဝါး (ခ) သီလ၊သမာဓိ မပါဘဲ မည်သည့် အလုပ်မျှ မလုပ်ပါနှင့် ။ ဧကန်မုချ သက္က်ဝါး နှင့်အတူ ပြုလုပ်သည့် လုပ်ရပ် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သဘောတူ လက်ခံတော်မူမည်။ ဤအတွက် ကြောင့် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် မိန့်တော်မူသည်။ အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် သည် သီလ၊သမာ ဓိရှိသူများ ၏ လုပ်ရပ်များ ကိုသာလျှင် လက်ခံ သဘောတူတောည်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အသင် အနေဖြင့် ဂိုနာ (ခ) အပြစ် နှင့် ဝေးဝေးနေမည် ၊ ရှောင်ကြဉ် မည် ဆိုလျင် ၎င်း၏လုပ်ရပ်သည် အနည်းငယ် ဖြစ်နေသော်လည်း အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် လက်ခံတော် မူ မည်။ လက်ခံတော်မူမှာ စကြာဝဠာ ကို ပြုစု ပျိုးထောင် တော်မူသည့် အရှင် ဘက် မှ ဖြစ်၍ အလုပ် သေး အလုပ် ကြီးဟူ၍ မရှိတော့ချေ။
ဤအတွက်ကြောင့် အီမာန်ရှင်များ အနေဖြင့် မလွဲ မသွေ အပြစ်(ခ) ဂိုနာ ကိုအလွန်တရာ ကြောက်ရပါ မည်။ အလွန် တရာမိမိကိုယ့် ကို သတိပြုဂရု ရှိရပါမည်။ ထိုမှ သာလျင် ကောင်းသည့် အလုပ်ကို ပြုနိုင် မည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက် ထို ကောင်းမြတ်သည့် အလုပ်များ ကို အာလေ့ မိုဟမ္မဒ် (အ.စ) နှင့်နီးစပ်မှု ရရရန် ၎င်းတို့ ၏ ဘေးတွင် နေရာ ရရန် ပို့ဆောင်ရ ပါမည်။ ဂိုနာပြုလုပ်မိ၍ အချည်းနှီး ဖြစ်သွားတာမျိုး ၊ ပျက်ပယ်သွားတာမျိုး မဖြစ်ရန် လိုပါသည်။ မနုဿ လူသား အား မိမိ၏လက်ဖြင့် မိမိစုဆောင်း ထား သည့် ကောင်းမြတ် သည့် အလုပ်များ ကို အချည်းနှီး ဖြစ် စေ သည့် ဆုံး ရှုံးမှု ကို အရမ်း သတိပြု ရန် လိုအပ် ပါသည်။
ကျမ်းကိုး ။ ။ အိုဒသွဒ်ဒအီကျမ်း